Fampielezana vaovao tsy marina Tovovavy iray nampidirina am-ponja vonjimaika
Voasambotry ny sampan’asa miady amin'ny heloka an'habaka na ny “Service de lutte contre cybercriminalité” an’ny zandarimaria ny tovovavy iray voatonona ho ati-doha nikotrika ilay horonam-peo naparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera.
Raha tsiahivina dia nisy horonam-peo nalaina ary niparitaka tamin’ny tambajotran-tserasera mikasika ny vokatry ny Coronavirus teto Madagasikara. Nolazaina tamin’io horonam-peo io tany amin’ny 20 martsa tany ho any fa efa misy 200 ny voan’ny aretina COVID-19 eto Antananarivo, 70 any Toamasina ary voalaza fa efa nisy maty ireo lazaina fa marary ireo. Nolazaina ihany koa fa mahazo fandrahonana ny mpanao gazety ka tsy afaka mamoaka vaovao. Raha araka ny vaovao ofisialy anefa dia tsy mitombina velively io vaovao naparitaka io hatramin’ny datin’ny 08 aprily teo. Marihina moa fa mpanentana amina fahitalavitra tsy miankina iray ity tovovavy ity. Fampielezana vaovao tsy marina mety hitarika fanakorontanana ny filaminam-bahoaka no vesatra hanenjehana azy. Nampidirina am-ponja vonjimaika moa izy miandry ny fitsarana azy, hamantarana ny tena marina momba ity raharaha ity.